Ukunikezwa kwesingeniso: Blackview BV8800 ngama-euro angama-225 kuphela | Izindaba zegajethi
U-Ignacio Sala | 10/01/2022 14:00 | AmaSelula
IBlackview yethule ukubheja kwayo okusha kwango-2021 ekupheleni kuka-2022. Sikhuluma ngeBlackview BV8800, itheminali efika emakethe nabathile. ngaphezu kokusebenza okukhangayo kanye nenani lemali. Ukuze sigubhe ukwethulwa kwayo, singathola le divayisi nje Ama-euro angama-225 nge-AliExpress.
Uma ufuna iselula ene- iprosesa enamandla, inkumbulo eyanele kanye nesitoreji Futhi lokho kusinikeza isethi yamakhamera athakazelisayo nebhethri elihle, kufanele ubheke yonke into le divayisi esinikeza yona futhi esiyichaza ngezansi.
I-Blackview BV8800 esanda kwethulwa ihlanganisa inani elikhulu le ukuthuthukiswa uma kuqhathaniswa nezinguqulo zangaphambilini zalo mkhiqizi futhi inakho konke okuzokwenza ukuthi ibe yifoni oyifunayo, kungakhathaliseki ukuthi uyisebenzisa kanjani.
Uma uthanda ukuphuma ngaphandle, kufanele wazi ukuthi iBlackview BV8800 ihlanganisa Isitifiketi se-MIL-STD-810H, isethi yamakhamera angu-4, okuhlanganisa ikhamera yombono wasebusuku kanye nebhethri elingaphezu kuka-8.000 mAh ongeke ukhathazeke ngayo ngokuyishaja ngokuqhubekayo.
1 Blackview 8800 Imininingwane
2 Amakhamera nganoma yisiphi isidingo
3 Amandla okuzijabulisa okukhulu
4 Ibhethri izinsuku ezimbalwa
5 Ukumelana nokushaqeka nokuwa
6 Isibonisi esingu-90 Hz
7 Ihambisana ne-Google Play
8 Izici zokuphepha
9 Jabulela ukunikezwa
Blackview 8800 Imininingwane
Isistimu yokusebenza I-Doke OS 3.0 esekelwe ku-Android 11
Isikrini 6.58 amayintshi - IPS - 90 Hz ukuvuselela - 85% isilinganiso sesikrini
Ukulungiswa kwesikrini 2408 × 1080 I-HD Egcwele +
Umseshi IMediaTek Helio G96
Isitoreji 128 GB
Ibhetri 8380 mAh - Isekela ukushaja okusheshayo okungu-33W
Amakhamera angemuva I-50 MP + 20 MP + 8 MP + 2 MP
Wi-Fi I-802.11 a / b / g / n / ac
I-Versión de Bluetooth 5.2
Ukuhamba GPS - GLONASS - Beidou - Galileo
Amanethiwekhi I-GSM 850/900/1800/1900
Izitifiketi IP68 / IP69K / MIL-STD-810H
Imibala I-Navy green / Mecha Orange / Conquest Black
Isisindo I-365 amagremu
abanye I-Dual Nano SIM - NFC - Inzwa yezigxivizo zeminwe - Ukuqashelwa kobuso - SOS - OTG - Google Play
Amakhamera nganoma yisiphi isidingo
Ngokungafani nabakhiqizi abaningi abasezingeni eliphezulu, abaye banamathela ku-12 MP, IBlackview isinika inzwa enkulu engu-50 MP, isixazululo esizosivumela ukuthi sikhulise konke ukuthwebula kwethu futhi sijabulele zonke izici eziboniswa kuyo.
Futhi, lapho uphrinta, asinawo umkhawulo wosayizi ofanayo ukuthi sithola 12 MP kuphela. Ngaphezu kwalokho, iphinde ibe nenzwa engu-20 MP, inzwa yokubona ebusuku ezosivumela ukuthi sithathe izithombe namavidiyo kunoma yisiphi isimo sokukhanya.
Kanye nazo zombili izinzwa, siphinde sithole a inzwa ye-engeli ebanzi, inzwa esinikeza i-engeli yokubuka engu-117-degree kanye nenzwa engu-8 MP enesibopho sokufiphalisa ingemuva lezithombe esizithatha ngemodi yokuma ngobude.
Wonke amakhamera ayasebenzisa Intelligence yokufakelwa ngesikhathi sokucubungula, ukuze kuthuthukiswe, hhayi kuphela izinga lokuthunjwa, kodwa futhi nokuqeda ukungapheleli okuncane.
Ngaphambili, Sithola ikhamera engu-16 MP, ikhamera ehlanganisa nezihlungi zobuhle ukuze sithuthukise ama-selfies ethu, ukunciphisa imigqa yokubonisa, ukungapheleli nokunye, kamuva, siphoqeleka ukuthi sikususe.
Amandla okuzijabulisa okukhulu
Ukuthi ujabulele imidlalo efunwa kakhulu noma ukurekhoda amavidiyo ngokuqhubekayo noma ukuthatha izithombe, ngephrosesa IMediaTek Helio G96 ngeke sibe nezinkinga zokusebenza.
Kanye nalokhu kucubungula, okudlula amaphuzu angu-300.000 kuma-benchmarks e-AnTuTu, sithola 8 GB yohlobo lwenkumbulo ye-RAM i-LPDDR4x kanye no-128 GB wesitoreji sangaphakathi sohlobo lwe-UFS 2.1.
Kokubili inkumbulo ye-LPDDR4X kanye nesitoreji se-UFS 2.1 kusinikeza isivinini sedatha nokuphathwa kohlelo lokusebenza izogwema ukubambezeleka okunyanyekayo, lags nabanye ukuthi sisematheminali anesizotha.
Ibhethri izinsuku ezimbalwa
La ibhethri nekhamera kungcwele. Bonke abasebenzisi abafuna ukuvuselela itheminali yabo endala ngentsha kufanele ngaso sonke isikhathi bacabangele lezi zigaba ezimbili. Sesike sakhuluma ngesigaba sekhamera esingenhla.
Uma sikhuluma ngebhethri, kufanele sikhulume nge- 8.340 mAh ehlinzekwa yiBlackview BV8800. Ngaleli bhethri elikhulukazi, elingahlala izinsuku ezingafika kwezingu-30 kokubekwe eceleni, singakwazi ukuya esibhakabhakeni ngokuthula okuphelele kwengqondo ngaphandle kokwesaba ukuvaleleka.
IBlackview BV8800 iyona 33W ukushaja okusheshayo kuyahambisana, okusivumela ukuthi siyishaje ngamahora angu-1,5 nje. Uma sisebenzisa ishaja yamandla aphansi, isikhathi sokushaja sizoba side.
Kufaka futhi ukusekela ukushaja okuhlanekezelwe, esivumela ukuthi sishaje amanye amadivaysi ngebhethri yale divayisi ngentambo ye-USB-C.
Ukumelana nokushaqeka nokuwa
Njengamadivayisi amaningi avela kulo mkhiqizi, i-BV8800 iyasinikeza isitifiketi sezempiIsitifiketi sezempi sibuyekezelwe kumazinga amasha, okuyenza ifaneleke kulabo basebenzisi abathanda ukwenza uhambo lokuya ngaphandle.
Futhi, ngiyabonga ikhamera yokubuka ebusuku, singabheka kalula futhi ngaphandle kokusebenzisa i-flashlight, uma eduze kwethu kukhona isilwane noma, thola ilungu leqembu esilahlekile.
Isibonisi esingu-90 Hz
Isikrini seBlackview BV8800, sifinyelela ku-6,58 amayintshi, sinesinqumo se-FullHD + kanye nesilinganiso sesikrini esingu-85%. Kodwa, ukukhanga kwayo okuyinhloko kutholakala ngezinga layo lokuqabuleka, izinga lokuvuselela elifinyelela ku-90 Hz.
Ngenxa yaleli zinga eliphezulu lokuvuselela, konke okuqukethwe, kokubili imidlalo nezinhlelo zokusebenza zokuphequlula namakhasi ewebhu, izobukeka imanzi kakhulu kunokuboniswa kwendabuko okungu-60Hz, njengoba ozimele abangu-90 ngomzuzwana bazoboniswa njalo ngomzuzwana esikhundleni sika-60.
Ihambisana ne-Google Play
Ngaphakathi kweBlackview BV8800, sithola isendlalelo sokwenza ngokwezifiso I-Doke OS 3.0, esekelwe ku-Android 11 futhi ihambisana ne-Google Play Isitolo, esizosivumela ukuthi sifake noma yiluphi uhlelo lokusebenza olutholakala esitolo se-Google esisemthethweni.
I-Doke OS 3.0 iyi-a ukubuyekezwa okukhulu uma kuqhathaniswa ne-Doke OS 2.0. Kuhlanganisa ukuthinta okunembile kokuzulazula, idizayini esebenziseka kalula, ukulayisha kuqala uhlelo lokusebenza oluhlakaniphile, inothiphedi ebuyekeziwe esekela ukubhala ngesandla nokuqoshwa kwememo yezwi ...
Njengesiphetho esihle esiwufanele usawoti wayo, iBlackview BV8800, ihlanganisa kokubili izinzwa zeminwe kufakwe inkinobho yokuqala kanye nohlelo lwe ukuqashelwa kobuso. Ngaphezu kwalokho, kuhlanganisa nenkinobho esingayenza ngokwezifiso ukusebenza kwayo kwemisebenzi ehlukene engu-7.
I-NFC chip ayikwazanga ukushoda kule divayisi. Ngenxa yale chip, singakhokha kunoma yiliphi ibhizinisi ngekhadi lethu lesikweletu ngaphandle kokuthi siphathe isikhwama sethu semali kanye nezithuthi zomphakathi.
La ukwethulwa kwephromoshini lokho kusivumela ukuthi sitholele iBlackview BV8800 I-VAT engama-euro angama-225 kuphela kanye nokuthunyelwa kufakiwe, ikhawulelwe kumayunithi okuqala angama-500. Uma uthanda konke okunikezwa yilesi siphetho esisha seBlackview, ungacabangi kabili.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Isipho sokwethula: IBlackview BV8800 ngama-euro angama-225 kuphela